Buuq ka Dhextaagan Xisbiga Shaqaalaha | PanSomalism
For The Truth For Somalia
Posted by pansomalism ⋅ December 22, 2011 ⋅ Leave a comment
Halkaan ka Akhriso Nrk oo Af Norweji ah.
Jaraaidada iyo idaacadaha Norway ee VG iyo Nrk ayaa soo qoray in xildhibaanada somalidu dooratay ay ka kala yimaadeen Somaliya iyo Somaliland. Jaraaidyada aya ka soo xigtay war uu sheegay mid ka mid ah hogaamiyaasha xisbiga shaqaalaha oo lagu magacaabo Runa Gerharsen. Runa ayaa sheegay in xildhibaanada Somaliyeed ay ka kala yimaadeen Soomaaliya iyo Somaliland. Arinkaan ayaa fajac waxuu ku noqday Somali dooratay sadexda xildhibaan waayo waxay codkooda u siiyeen Somalida inay yihiin Somali ka timid Soomaaliya, halka kuwo kalena codkooda u dhiibeen iyaga oo ogaa in qaar ka mid ah ay ka yimaadeen Somaliland. Intersom ayaa waxaa hadaba la soo xiriiray Somali codkooda siiyay Bashi iyo Fadumo oo iswaydiinaya: “Tolow waa kuma labadooda qofka anaga nagu oranaya: “Somaliya ayaan ka imid, Norwejigana ku oronayaya Somaliland ayaan ka imid.”Intersom ayaa email ay ku waydiinso in dadwaynaha u cadeeyaan halka ay ka yimaadeen ayaa sadexdooda midna soo jawaabin, laakiin talefoon lagu helay Ubax Cabdulqadir oo kaliya, iyada oo tiri: “Waligeey ma dhihin aniga Somaliland ayaan ka imid. In Somali la kala googooyo oo la kala qub qubana ma aaminsani. Soomaali waa ii Soomaali”
Norway/IMDI: Ururada ajnabiga iyo kuwa Noorwejiga oo lacag lagu dal dalo halka kuwa Soomaalidana diidmo qayaxan laga hor keeno. Arinkaan ayaa waxaa loo aanaynayaa Soomaalida oon isku xirnayn iyo shaqsiyaad lagala tashto arimaha Soomaalida oo warbixin qaldan ka dhiiba Soomaalida. Tan kale Soomaali badan ayaa waxay qabtaa in sababta ugu wayn ay tahay Soomaalida oo la cunsuriyeeyo.
Halkaan ka fiiri oo ka akhri ururada lacagaha ka helay IMDI asbuucii hore oo aysan ku jirin ururo Soomaaliyeed laakiin aad ku arkaysid Kurdi, Norweji, Afghanistan, Pakistan iyo kuwo kale.
Ururka G10 oo qarka u saaran burbur. Ururka G10 oo ay ku midoobeen beelaha Hawiye ee degan Norway ayaa halis ugu jira inuu burburo kadib markii sadex qabiil oo hawiyaha ka tirsani ay iskaga dareereen ururka.
Waxyaalaha lagu eedeenayo G10 ayaa waxaa ka mid ah in Bashe Musse dhexboodayo oo uu si dadban hogaanka ugu qabtay urur beeleedka hawiye.
Laba sano ka hor waxaa qaab dhismeedka G10 ka soo horjeestay qabiil ka mid ah qabiilada Hawiye kaas oo diiday inuu lug ku yeesho urur qaab beeleed lagu dhisayo
Hal sano ka horna waxaa G10 iskaga baxay qabiil kale kadib markii ay u bogi waayeen qaabka G10 ku socotay. Asubuucaan dhexdiisa ayaa afhayeen uu leeyahay qabiil ka mid ah qabiilada ugu tirada badan beelaha hawiye dhexdooda waxuu u sheegayWarcusub Media inay iskaga baxeen ururka G10. Bashi ayaan ka soo jawaabin email Warcusub media ku waydiisay bal inuu isagu hogaamiyo G10 iyo in kale. Nasiib daro talefon ma aanan ku helin gudoomiyaha G10.
Hadalo ay ku cel celiyaan shaqsiyaad badan oo u waramay Warcusub Media ayaa waxaa ka mid ah: “G10 waxaa hor booda shaqsiyaad beelahoodu aysan soo dooran. Inta taas laga saxayana G10 waxay qarka u saaran tahay bur bur.” Dad kale oon katirsanayn G10 ayaa iyaguna waxay Warcusub Media ku yiraahdeen:
“Wax qabiil lagu dhisay natiijo ma leh”
Eedaymaha loo hayo ninkaan oo soo badanaya. Ururka jaaliyada Somaliland oo laga xayuubiyay hada ka hor kadib markii lagu eedeeyay inuu ururka jaaliyada ka dhigtay boorso uu isagu leeyahay. Urur wayn oo Soomaalida Norway samaysan lahayd 2005tii oo ka xaday magacii ururwaynaha. Kulankii udhexeeyay wafuuda Soomaaliya iyo Soomaalida Norway oo uu qasay. Ururka G10 oo doonaya inuu ninku ka dhex baxo ururka iyo dad badan oo isaga doortay oo hada shallaay taagan.
Furihii Jaaliyada Somaliland Norway ayuu diiday inuu dhiibo
“Ururka jaaliyada Somaliland Norway leedahay ayaa hada ka hor waxuu diiday inuu ka degto ka dib markii uu ka dhigtay ururka boorso uu leeyahay. Gurigiisa ayaa loogu tagay oo furihii jaaliyada ayaa xoog looga soo qaaday. Bashi ayaa xiligaa ahaa hogaamiyaha ururka SWO inta uusan qaban Tahar,” Sidaa waxaa Warcusub Media u sheegay dhowr qof oo ka tirsan Jaaliyada Somaliland Norway oon rabin magacooda in la sheego iyaga oo ku daray warka:
“Anaga waan naqaan Bashi oo wax uma dhiibano. Waxaan ka cabsanaa inuu burburiyo wixii aan u dhiibano.”
Magac urur oo Xaday
Waxyaalaha kale ee Bashi lagu eedeenayo ayaa waxaa ka mid ah in urur wayne Somalida Norway rabtay inay samaysato sanadkii 2005tii oo dhowr bilood soo socday la arkay markii dambe isaga oo qaatay magacii ururuka loo bixiyay oo ahaa: “Somalisk nettverk.” Dad arinkaa ka hadlaya ayaa yiri:
“Waxuu magacaas u qaatay oo ula aaday meediyada Norway si uu magac ugu helo ee ma ahayn inuu Somali ku difaaco sida dadka qaarkiis qabaan.”
Urur uu qayaameeyay
Sanadkaan gudihiisa ayaa ururwayne uu soo abaabulay Saciid Xoogsade iyo Soomaali kale oo la rabay in hal cod laga yeesho sidii looga hortagi lahaa inaan la qaadan caruurta Soomaaliyeed ayaa Bashi waxuu jeebka gashtay liiskii talefoonada iyo dadka magacyadooda halkaa iskugu yimid si aysan dadku iskula xiriirin.”
Shirwayne uu qasay
Waxyaalaha kale oo lagu haysto Bashi ayaa waxaa ka mid ah inuu si ulakac ah u qasay shirkii u dhexeeyay wafuudii ka timid Soomaaliya iyo Soomaalida Norway.
Bashi ayaa ka gaabsaday inuu wax ka yiraahdo eedaymaha.
Dadwaynaha ra’ayigooda ku saabsan arinkaan waa la soo dhawaynayaa oo waxaa lagu daabacayaa www.warcusub.com
Noogu soo dir halkaan:warcusub@gmail.com Waa inaad masawir iyo magacaaga soo raacisaa si laguu aqoonsado. Laakiin masawirka qasab ma ahan.
Qaar ka tirsan taageerayaasha ururka G10 ayaa usheegay Warcusub Media inay G10 iskaga tageen kadib markii Bashi uu si dadban hogaanka ugu qabtay ururka G10. Laakiin shirar xasaasi ah oo socday beryahaan ayaa go’aan lagu gaaray in Bashi uusan shaqo ku lahaan doonin ururka G10.
Baashi ayaa ololaha doorashada waxuu ku galay inuu Somali wax u qaban doono. Ilaa iyo hada lama hayo wax uu qabtay Somalida. Dad badan oo codkooda siiyay hada ka hor Bashi ayaa taagan shallaay iyaga oo Bashi u arka inuu ka dhigtay jaranjaro lagu fuulayay golaha deegaanka.
Wararka ay ku taamayaan dadkaas oo Warcusub Media u balanqaaday inaysan magacooda sheegin ayaa waxaa ka mid ah:
“Waxaan ku fikirayaa inaan hada iskaga baxo xisbiga shaqaalaha Baashi dartiis.” Kuwo kale ayaa leh: “Codkii aan siiyay Baashi wuu iga qasaaray!” Kuwo u ololeenayay baashi ayaa waxaa laga hayaa warkaan:
“Anigu ma qasaarin waayo bani’aadan mar uun baad barataa! Soow hada mar kale nooma imaan doono oo nama dhihi doono cod ayaan rabaa?”
« Markale Xildhibaanno gawda iska saaray , Isla markaana markii Dambe Af Garad Ku Soo Gaba Gaboobey
Qormo:- Burburintii Dunidii Beesha Baajuunta »